Prisma mechiri beta ọha na eze ụbọchị ebupụta ya na Android | Gam akporosis
Prisma mechiri beta mepere emepe n'ihi nnukwu nnabata ndị ọrụ
Twobọchị abụọ gara aga Prisma kwalitere ọha na eze emeghe beta na gam akporo ka ndị ọrụ nke OS a nwee ike mara anwansi ndị bụ nka gị nzacha ndị nwere ike ịgbanwe foto anyị ka anyị bụrụ ndị pụrụ iche. Ha enweela ike inye algorithm pụrụ iche na ngwa ahụ ka ọ bụrụ ihe ịga nke ọma na iOS wee si, n'ikpeazụ, rutere na gam akporo.
O doro anya na enwere ọtụtụ n'ime gị ihu na ndakpọ olileanya na, mgbe ị na-anwa itinye nzacha, ị ga-ahụ ozi ahụ na-ekele gị maka isonye na beta yana ị ga-echere maka mwepụta nke ngwa ahụ. Ma ọ bụ na naanị ụbọchị abụọ, Prisma emechila beta ọhaneze site na ọkwa na n'oge na-adịghị anya, e chere na njedebe nke ọnwa a, anyị ga-enwe ike ibudata ya na Play Store.
Prisma dị anya na nzacha ndị ahụ anyị ejirila ya mee ihe na Instagram, VSCO na ọtụtụ ndị ọzọ, iji gaa na nka nke dabere na algorithm nke "na-ahụ" foto iji tinye ihe nzacha ndị ahụ niile na agba. Eziokwu bụ na obere oge m nwere iji ya, ihe nzacha ọ na-emetụta dị oke mma ma mepụta ụzọ ọzọ iji gbanwee onyogho na ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ nwere mgbagwoju anya mgbe anyị na-edochi foto ha.
Yabụ ugbu a, anyị nwere ike ichere maka igba egbe ahụ bụrụ onye isi site n’ọgwụgwụ ọnwa a mgbe ha dozie nsogbu niile na sava ha na obere ahụhụ ndị ahụ na-apụtakarị na betas n’ihu ọha. Ihe ha rụzuru bụ ime ka atụmanya gbasara ngwa nyocha nka a gosipụtara uru dị ukwuu yana kwa ụbọchị ebido ya, ọtụtụ iri puku ndị ọrụ ga-aga na Storelọ Ahịa Play iji wụnye ya. Anyị ga-amụrụ anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Prisma mechiri beta mepere emepe n'ihi nnukwu nnabata ndị ọrụ
Ngwa kachasị mma ile ihe nkiri na gam akporo gị